Dagaal Qasaaro Gaystay oo Maanta ka Dhacay Galbeedka Magaalada Baladweyne (Dhagayso)
December 21, 2016 – Waxa ay faah faahinno dheeraad ahi ay ka soo baxayaan Dagaal gaystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo maanta ka dhacay Galbeedka Magaalada Beledweyne ee xarunta Gobolka Hiiraan.
Deegaanka dagaalka uu ka dhacay oo lagu magacaabo Caloola Cad oo qiyaastii 15-KM u jira Magaalada Baledweyne, ayaa waxa uu dagaalku u dhaxeeyay Dagaalyahano ka tirsan maleeshiyaadka Al Shabaab iyo Maleeshiyo deegaanka ah oo Isbaaro u tiilay goobtaasi.
Dagaalkan ayaa yimid kadib markii Dagaalyahanada Shabaab ay weerar ku qaadeen Maleeshiyada Isbaarada u tiilay, sida ay sheegayaan wararkana meeshii laga kala cayriyay ragii ay Isbaaatada u tiilay.
Inta la xaqiijiyay Dagaalkan ayaa waxaa ku dhintay 1 Qof oo ka mid ahaa Maleeshiyadii Isbaarada dhigtay, halka sidoo kalena uu ku dhaawacmay mid kale.
Dagaalyahanada Al Shabaab ayaa la sheegayaa inay la wareegeen goobta uu Dagaalka ka dhacay, kadib markii ay carareen Maleeshiyadii Isbaarada dhigatay, waxaana hada degan Maleeshiyaad Al Shabaab ka tirsan goobtii uu Dagaalka ka dhacay.
December 21, 2016 tuugahaladilo2015